पुरुष : प्रिय, के म पहिलो पुरुष हुँ जसले तिमीसँग प्रेम गरें ?
स्त्री : हो, तिमी नै पहिलो पुरुष हौ जसले मसँग प्रेम गरिरहेका छौं । यसभन्दा पहिले त म नै पुरुषसँग प्रेम गर्थें ।
प्रेमी : प्रिया, यदि म तिम्रो मायामा हराएँ भने के गर्छौं ?
प्रेमिका : प्रिय पहिले त म खोज्छु, खोज्दा पनि भेटिन भने चाहिँ रेडियो, पत्रिका, टेलिभिजनमा विज्ञापन दिन्छु तैपनि भेटिनँ भने म अर्कै पुरुषसँग विवाह गर्छु ।
प्रेमी : तिमी मेरी सपनाकी रानी हौं ।
प्रेमिका (रिसाएर) : म सपनामा विश्वास गर्दिनँ, सपना सधंैं
झूटो हुन्छ ।
प्रेमी : हैन, तिमीले यो जिन्स पाइन्ट लगाएको देखेर घरमा आमाले गाली गर्नुहुन्न ?
प्रेमिका : किन नगर्नु नि ? धेरै गाली गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीं त घरमै नबसूँजस्तो लाग्छ ।
प्रेमी : अनि त्यति धेरै गाली किन गर्नुभएको नि ?
प्रेमिका : यो जिन्स पाइन्ट नै आमाको हो नि त ।
प्रेमी (होटलमा सँगै खाइरहेकी प्रेमिकासँग) : प्रिय, म तिमीलाई अन्तिमपल्ट सोध्छु– मसित विवाह गर्ने कि नगर्ने ?
प्रेमिका : अहँ गर्दिनँ ।
प्रेमी (रिसले) : वेटर, हामी दुई जनाको अलग–अलग बिल ल्याऊ ।
प्रेमिकाले आफ्ना उत्ताउलो प्रेमीसँग भनिन् : मैले तय गरिसकें, जबसम्म तिमी कुनै साहसिक कार्य गर्दैनौ तबसम्म म तिमीसँग विवाह गर्दिनँ ।
प्रेमीले प्रेमिकालाई सरसर्ती हेरेपछि जवाफ दिए : प्रिय, तिमीसँग विवाह गर्नु के कुनै साहसभन्दा कम हो ?
प्रेमीको काका : मेरो भतिजाको ह्दय निकै विशाल छ ।
प्रेमिका : हो, मलाई थाहा छ, मैले उसको प्रेमको तीनवटा कथा पनि सुनिसकें ।
प्रेमी : तिमीसँग भेटेदेखि बहुतै कम खान थालेको छु । रक्सी खान छाडें, धुम्रपान गर्दिनँ ।
प्रेमिका : हामीबीचको प्रेमले सबै कुरा बिर्साइदियो ?
प्रेमी : प्रेमले होइन, मायालु । पैसाको अभावले ।
एउटी युवतीको चाहना : जसले सधैं प्रेम गरोस् ।
अर्की युवतीको चाहना : जसले सधैं राम्रो खाना पकाउन सकोस् ।
अर्की युवती : जसले पैसा कमाओस् ।
त्यसमा थप यस्तो भाग्य कि तीनै जनाले एक–अर्कालाई भेट्न नसकून् ।
एउटा प्रेमी आफ्नी प्रेमिकाको घरमा गएछ । प्रेमिका चिया पकाउन गएको मौका छोपेर प्रेमिकाको मोबाइल हेरेछ र सोचेछ, होइन, यसले मेरो नाम के भनेर सेभ गरेकी रै’छ ? हेर्नुपर्‍यो । अनि प्रेमिकाको मोबाइलमा डायल गरेछ । त्यहाँ आएछ– मूर्ख नम्बर– ५ कलिङ ।
प्रेमी–प्रेमिकाको जोडी पार्कमा बसेर स्याउ खाँदै थिए..
प्रेमी कतै पनि नहेरी प्रेमिकाको आँखामा हेरिरहेको’ थियो..
प्रेमिका : (लजाउँदै) के हेरेको त्यस्तो नशालु नजरले ?
प्रेमी : मोटी अलि–अलि गरेर खा.. डेढ सय रुपैयाँ किलो छ स्याउ..
एउटा बाबुले आफ्नो छोरालाई चरा र बारुलाका बारेमा सोधेछ ।
बाबु : छोरा, तिमीलाई चरा र बारुलाका बारेमा केही थाहा छ ?
छोरा : अहँ, जान्नुपर्‍या छैन मलाई ।
बाबु (अचम्म मान्दै) : किन ?
छोरा : तिनीहरू दुवै एक–अर्कालाई प्रेम गर्न सक्दैनन्, त्यसैले ।
केटीले भनिछ : म तिमीभन्दा एक वर्ष जेठी छु ।
केटाले भनेछ : केहि फरक पर्दैन, म तिमीसँग एक वर्षपछि मात्र विवाह गर्छु ।
एउटी प्रेमिका आफ्नो प्रेमीसँग भन्दै थिइन् : हजुर, हाम्रो छोराको नाम के राख्ने ?
प्रेमीले रिसाउँदै भनेछ : हवाईजहाज ।
प्रेमिका : छि:छि: † त्यस्तो नाम किन राख्ने ?
प्रेमी : ९ महिना लामो बाटो छोराले ७ महिनामै पार गरेपछि के राख्ने त ?
एक जोडीले आत्महत्या गर्ने निर्णय गरेछ र अग्लो घरबाट पहिले प्रेमीले हाम फालेछ । त्यत्तिकैमा प्रेमिकाले आँखा बन्द गरिछ र भनिछ : माया त अन्धो हुन्छ र उ फर्केर गइछ । त्यो देखेर प्रेमीले पनि यसो भन्दै आफ्नो प्यारासुट खोलेछ : माया त कहिल्यै मर्दैन †
एक प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई फूल गिफ्ट दिए । खुसीले उनकी प्रेमिकाले प्रेमीको किस खाइन् । यत्तिकैमा प्रेमी तुरुन्तै बाहिर जान खोजे । प्रेमिकाले एक्कासि सोधिन् : किन, के भयो ? रिसाउनुभएको त होइन ?
प्रेमी : होइन ।
प्रेमिका : अनि किन बाहिर जान लाग्नुभएको ?
प्रेमी : अझै अलि धेरै फूल ल्याइदिन ।
एक युवकले आफू अहिलेसम्म कुमार बस्नुपरेको दु:खदायी घटना यसरी सुनायो : म कन्या क्याम्पसको लाइब्रेरी शाखामा काम गर्थें । त्यो क्याम्पसमा काम गर्दा सबैलाई नमस्ते बहिनी, के लिन आउनुभयो ? के सेवा गरौं भन्नुपथ्र्याे ।
काम गर्दागर्दै ममा जोसुकैलाई नमस्ते बहिनी भन्ने बानी बस्यो । विवाहका लागि केटी हेर्न नगएको पनि होइन, तर त्यहाँ पनि नमस्ते बहिनी, के सेवा गरौं भन्न आयो । मैले बहिनी भनेपछि ती युवतीले विवाह गर्न अस्वीकार गरिन् ।
धेरै पछि एक युवतीले मलाई प्रेमपत्र लेखिन् । पत्रको जवाफमा पनि मैंले आफ्नो बानी छाड्न नसकी बहिनी नमस्कार, तिम्रो पत्र पाएर यो दाजु हर्षित छ लेख्न पुगेछु । त्यसपछि उनले पनि अर्कैसँग विवाह गरिन् ।
प्रेमिका : ऊ त्यहाँ हेर त, त्यो केटाले त्यो केटीलाई कत्ति माया गरिरहेको छ, तिमीले चाहिँ किन नगरेको ?
प्रेमि : म त्यो केटीलाई चिन्दा त चिन्दिनँ, कसरी माया गर्नु ?
नयन : के तिमी रमनको नयाँ व्यवहार जान्दछौ ?
चमन : अँ †
नयन : भन त के हो ?
चमन : गत साता मात्र रमन एउटी नर्सको प्रेममा पागल भयो । निकै सोचविचार गरेर उसले नर्सलाई प्रेमपत्र लेख्यो । थाहा छ, त्यसमा के लेखिएको थियो, ‘आई लभ यु सिस्टर’ ।
नरेश : म निकै ठूलो खेलाडी बन्न चाहन्छु, तर यो मुहारका कारण मैले खेलाडी बन्ने आइडिया नै छोडिदिएँ ।
प्रेमिका : अनुहारको खेलाडीसँग केको लिनुदिनु ?
नरेश : छ नि † जिन्दगीभर खेलेर मात्र बस्नुको के फाइदा ? म कुनै कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेसडर त बन्न सक्दिन नि ।
निन्द्रा भगाउने उत्तम उपाय— प्रेम गर्नुहोस् ।
किनकि– प्रेममा भोक, प्यास र निन्द्रा हराउँछ ।
प्रेम एउटा मीठो सपना हो भने विवाह के हो ?
अलार्म घडी ।
प्रेमी : अञ्जु, तिम्रो जीवनमा आउने पहिलो पुरुष मै हुँ ?
प्रेमिका : हो, किन सबै पुरुष मसँग यही कुरा सोध्छन् डार्लिङ ?
प्रेमी : तिमी विवाहपछि आफ्ना लागि छुट्टै घर त माग्दिनौ नि ?
प्रेमिका : अहँ, म त्यस्ती खालकी केटी होइन, बरु तिम्रो आमा र बाबुलाई छुट्टै घर बनाइदेऊ न ।
प्रेमीले रिसमा प्रेमिकालाई गालामा एक थप्पड लगाइदिएछ । प्रेमिका रुन थालिन् । त्यो देखेर....प्रेमी : डार्लिङ, पिट्नु पनि त प्रेमको निसानी हो नि †
त्यो कुरा सुनेर प्रेमिकाले जोडले गालामा दुई थप्पड लगाइदिएछन् र भनिछन् : हजुरले के सम्झनुभएको ? मचाहिँ हजुरलाई माया गर्दिनँ र ?
प्रेमी : मलाई पैसाको आवश्यकता छ । मेरो बाबा बिमारी हुनुहुन्छ ।
प्रेमिका : पैसाको त मलाई पनि आवश्यकता छ ।
प्रेमी : किन, के भयो ?
प्रेमिका : के हुनु नि ? तिमीलाई नै दिन नि ।
प्रेमी : मेरो त बिर्सने बानी नै बसिसक्यो । के यो खतरनाक
हुन सक्छ ?
प्रेमिका : किन हुँदैन, यदि तिमीले सास फेर्न बिर्सियौ भने मर्न पनि सक्छौ ।
प्रेमी : त्यसो भए आज राति १२ बजे हामी सहर छोडेर भाग्ने होइन त डार्लिङ ?
प्रेमिका : हो डार्लिङ, आजराति १२ बजे हामी यो सहर सधैंका लागि छोडेर जाँदैछौं ।
प्रेमी : आर यु स्योर ?
प्रेमिका: ल, कस्तो नपत्याएको, मेरो श्रीमान् सामान प्याक गर्न थालिसक्नुभएको छ ।
प्रेमिका : के तिमी मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ ?
प्रेमी : हो, साँच्चै म तिमीलाई प्रेम गर्छु, मैले आफ्नो लिस्ट हिजो फेरि चेक गरेको थिएँ ।
प्रेमिका : तिमी मसँग
प्रेम गर्छौं ?
प्रेमी : हो, गर्छु ।
प्रेमिका : तर तिमी त मेरो कुनै परवाह नै गर्दैनौ ?
प्रेमी : हेर, प्रेम गर्नेहरू कसैको परवाह गर्दैनन् ।
प्रेमिका : मलाई अँध्यारोमा
डर लाग्छ ।
प्रेमी : किन ? म छु नि त तिम्रो साथमा ।
प्रेमिका : त्यसैले त डर
लागेको नि ।
चौधरी ग्रुपले हालेको पिङको नाम सी जी पिङ
पुच्छरमा भैंसीलाई हल्लाउन सक्ने तागत हुँदैन
संकलक : जीवन भट्टराई
नमोटाउनुको एउटा कारण, काठमाडौंको माइक्रो बसमा च्याप्पिएर पनि हो
फरर अंग्रेजी बोल्न मन ला’छ, कुनचाहिं रक्सी पिउँदा ठीक होला ?